प्रसिद्ध प्ले Fonvizin, कसैले, स्कूल पाठ्यक्रम मा अनिवार्य अध्ययनको लागि व्यग्र घृणा सक्छ वास्तव मा साहित्य मार्गमा एउटा कारण लागि टाढा भयो। र धेरै कारण। उदाहरणका लागि, यो काम को लेखन को समय देखि मुख्य वर्ण को नाम साधारण भए। यो छैन Mitrofanushka परिचित गर्ने विद्यार्थी पाउन गाह्रो छ। केही Prost, Starodum वा Tsyfirkin, सम्झना तर यी वर्ण मूल वाक्यांश मार्फत यात्रा हुन सक्छ "ठूलो र शक्तिशाली।" को कमेडी "मामूली" को वचनहरू विचार गर्नुहोस्।
म जान्न चाहँदैनन् ...
निस्सन्देह, सबै भन्दा प्रसिद्ध नैतिकता तुरुन्तै मानिसहरूलाई प्रस्थान, र यो दिन गर्न वाक्यांश विभिन्न लेखक को धेरै कामहरू उल्लेख छैन, बोली भाषा मा पतन, "म जान्न विवाह गर्न चाहनुहुन्छ चाहँदैनन्।" र, जाहिर छ, यो पनि व्यंग्य को क्षमता मा, Fonvizin कौशलतासाथ एउटा देखिने trite मैक्सिम मा लगाए छैन। कथा यसको अविश्वसनीय क्षमता मा "द Oaf" संक्षिप्त को वचनहरू धेरै। तर यो ठूलो तनाव वर्ण आफ्नो primitivism, सकल अज्ञानता र skopidomstve मा एक पुस्ता मरिरहेका symbolizing mindedness।
यो अभिव्यक्ति feudal मालिक को त्यसपछि सम्पत्ति mired जो pettiness, जोड दिन्छ। नजिकै धोखा र यसलाई निम्नानुसार - तर, हामी नजीकको आधुनिक वातावरणमा राम्ररी लिन भने हामी सजिलै जसमा सार्वजनिक राम्रो ल्याउन छैन बन व्यक्ति लागि उच्चतम आदर्श र जीवन तिर उपभोक्ता मनोवृत्ति, मुख्य कुरा गर्दा जीवन, यो मनोवृत्ति उदाहरणहरू धेरै पाउनुहुनेछ "न्यानो।" तसर्थ, कमेडी को वचनहरू "द Oaf", दुई भन्दा बढी शताब्दीयौंदेखि पहिले को प्रयोग, अझै पनि छैन जो मान्छे को मन मा resonate "सबै एउटै" जो वरिपरि हेर्न र सुधार गर्न आवश्यक समाजमा कुराहरू धेरै अझै पनि त्यहाँ छ भनेर।
तपाईंलाई प्रत्यक्ष ...
सूची जारी गर्नुपर्छ। सामान्य मा, कमेडी "द Oaf" को वचनहरू, पनि वर्तमान भाषामा यात्रा, रूप "महत्त्वपूर्ण थाहा र बुझ्न" श्रेणी वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। अर्को विचार "प्रत्यक्ष र सिक्न।" वाक्यांश छ फेरि, यो आफ्नो प्रतिभा यो सरल मैक्सिम को सुने छैन जो कसैले फेला पार्न गाह्रो छ। पूर्ण इमानदार हुन, छैन Fonvizin यो वाक्यांश को लेखक हो, तर यो सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ कसरी राम्रो! केही मास्टर, भन्न। र के आफ्नो क्रेडिट गर्न डबल हुनुपर्छ लागि व्यंग्य, जस्ता एक कठिन क्षेत्रमा मास्टर।
सामान्य मा, टुक्रा को मुख्य विशेषता लेखक द्वारा लोकगीत को व्यापक प्रयोग हो। जाहिर छ, को कमेडी "द Oaf" यति धेरै वचनहरू अब राष्ट्रिय भाषा अलग। यो उल्लेखनीय काम कुन यो यति schoolchildren रुचि छ किन छैन - उज्ज्वल समाधान Fonvizina र लोक freaks - तिनीहरूले राम्ररी intertwined छन्।
यो भ्रम स्पष्ट पनि आधुनिक भाषामा देख्न सकिन्छ। यो देखिन्छ कि शताब्दीयौंदेखि मान्छे र मूल भाषा संग पीस काम गरेर आविष्कार यो संयोजन। "दोषी बिना दोषी" "समझदार" "सपना साँचो आउन", "पातलो हावा मा अचानक हराउनु।" यो जस्तो थियो, रूसी मान्छे सबै उदाहरणहरू छन्, तर कुनै - त्यसैले Maestro Fonvizin आधुनिक भाषाहरूको लागि टोन सेट गर्छ। यो कला को दुनिया मा ठूलो रूसी साहित्य सम्पूर्ण सम्पदाको को हाइलाइट छ यो उत्पादन, सबैभन्दा उल्लेखनीय सुविधाहरू छ।
अक्षरहरू बारेमा बिट
र प्ले "मामूली" को मुख्य वर्ण बारेमा पाठ्यक्रम भूल छैन,। त्यसैले ably र स्पष्ट उल्लेखनीय लेखक बाहिर spelled केही व्यक्तिहरूलाई द्वारा बोली यहाँ बाट दुवै बोली र पनि साहित्यिक भाषा मा, मान्छे गए कि वचनहरू। तिनीहरूलाई बारेमा केहि शब्द।
कुनै पनि व्यङ्ग्य, "मामूली", जो देखि उद्धरण, खैर जस्तै, एक साँच्चै लोकप्रिय, नायक लागि घृणा संग imbued, सम्पूर्ण कक्षाहरू को बेफाइदा symbolizing भएका छन्। हो, तिनीहरू उहाँले लेखक अधिकतम ध्यान समर्पित छ, सबै भन्दा उज्ज्वल र उभडा प्राप्त। तिनीहरूलाई म उत्पादन को विश्लेषण मा थप भन्न चाहन्छु। यो पनि प्ले मा सकारात्मक वर्ण को involuntary idealization कारण छ। र हुनत त्यहाँ Fonvizin मान्छे को ज्ञात इतिहास तिनीहरूलाई यस्तो लेखे कि प्रत्ययनीय रिपोर्टहरू छन्, तर तिनीहरू फोहर वा Skotinin Prost रूपमा स्मरणीय छैन। तिनीहरूले पनि वाक्य, बाँकी शताब्दीयौंदेखि बाहिर दे हुनत। तर स्मृति यसलाई खराब वर्ण राख्छ।
सुन्दर कमेडी जो लेखको रूपरेखा केही चर्चा विषयको थिए "द Oaf" वचनहरू केवल सकारात्मक छाप छोड्छ। पहिले, यो काममा र जीवनमा व्यावसायिकता को अज्ञानता, अभाव पर्दाफास उद्देश्य व्यंग्य nezavualirovannaya। जो महत्वपूर्ण र यो दिन छ, र शायद एकदम केहि समय को लागि साँचो हुनेछ। दोश्रो, यो जीवित रूसी भाषा को प्रभाव अन्तर्गत गठन phraseology को एक गोदाम छ। मिश्र धातु लेखक गरेको प्रतिभा Fonvizin र लोक प्रभाव हामीलाई एक अद्वितीय उत्पादन सुरक्षित एक कृति सकिन्छ कि दिन्छ। पाठक साहित्य को सख्त आँखा चश्मा शिक्षक, र बायाँ छ छाप अन्तर्गत अध्ययन गर्न मौका छ भने, यो कडा यसलाई पढ्न सिफारिस गरिएको छ। अब किनभने यो खुसी पार्न निश्चित छ।
"द ग्लास मनका खेल" - जर्मन लेखक हरमन हेस्स को मुख्य पुस्तक
"हाम्रो समयको नायक": उपन्यास सिर्जना को इतिहास
Laymen frenk Baum: जीवनी, रचनात्मकता। Oz बारेमा पुस्तक
Yury Bondarev: लेखकले को जीवनी र काम
फारसी खाडी - तेल र पर्यटक स्वर्ग
L2TP Mikrotik: सेटिङ। उपकरण Mikrotik
कार्यालयको कार्यालय "RESO" मा मास्को। बीमा कम्पनी "RESO-Garantiya"
"Aragvi" (रेस्टुरेन्ट): आधारभूत जानकारी, इतिहास र मेनू
Relativistic कण ठूलो
किन नङहरु exfoliate? समस्या को सम्भावितकारणहरू
Cephalalgia - यो रोग लागि हो? के तपाईं "cephalalgia" संग निदान भने के गर्ने?
कसरी आफ्नो बुबाको निवास स्थान मा बच्चा दर्ता गर्न। परिवार व्यवस्था
सल्लाहकार - एक किंडरगार्टन शिक्षक ...